Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » IProCare yezeMpilo efunyenwe yiClingence Holdings
I-Clinigence Holdings, Inc., enye yeenkampani ezihamba phambili kwitekhnoloji enika amandla, ethwala umngcipheko kwiinkampani ezilawula ezempilo, namhlanje ibhengeze ukuba igqibile ukufunyanwa kweProCare Health, Inc.
Ngokusekelwe kwi-Garden Grove, eCalifornia kwaye yasekwa kwi-2011, iProCare ngumbutho okhokelayo weenkonzo zolawulo ("MSO") okwangoku ubonelela ngeenkonzo zombutho omnye wokugcinwa kwezempilo ("HMO") kunye nemibutho emithathu ezimeleyo yogqirha ("IPAs") eMazantsi kunye naMazantsi. EMantla California. Ii-MSO yimibutho yeshishini ebonelela ngezixhobo zolawulo eziyimfuneko kunye netekhnoloji ye-IPA enobungozi ukuze isebenze ngempumelelo kubudlelwane babo nabarhwebi abanesivumelwano kunye neearhente zolawulo. Ii-MSOs zenza ukuba imibutho yoogqirha iphumelele ekucingeni umngcipheko wezezimali kunye noluntu, ukuphucula ukusebenza kombutho ekunikezeleni ngononophelo kunye nokubonelela ngohlalutyo lwedatha. I-ProCare ibonelela ngolawulo lwamabango, ukuthotyelwa, ukuqinisekiswa, ulawulo olusemgangathweni, ukusetyenziswa kosetyenziso, ikhontrakthi, ubudlelwane bababoneleli, iinkonzo zamalungu, ulawulo lokhathalelo, ukusetyenziswa kweekhowudi kunye neenkonzo zokunika ingxelo ngezemali, phakathi kwezinye iinkonzo.
Ngaphantsi kwemvumelwano yesivumelwano sokuthengwa kwempahla, uClininience ukhuphe izabelo ezingama-759,000 ezisanda kukhutshwa zesitokhwe esiqhelekileyo kubanikazi beeprojekthi zeProCare xa kuvalwa ngokutshintshisa iipesenti eziyi-100 zesahlulo se-ProCare. Ukongeza, ulwakhiwo lwemivuzo lubekwe endaweni yokuvuza iProCare ngayo nayiphi na ikhontrakthi entsha yeMSO kwixa elizayo.
"Ukufunyanwa kweProCare yinxalenye yesicwangciso esiqhubekayo sokukhula kwaye kusivumela ukuba sandise iphothifoliyo yethu kwicandelo leMSO," utshilo uWarren Hosseinion, MD, uSihlalo kunye neGosa eliyiNtloko lesiGqeba. "Siyavuya ukwamkela iqela leProCare, elinobuchule nothando oluya komeleza inkampani yethu."
"Sivuyiswa ukujoyina i-Clinigence, iqela lakhe lokulawula elineminyaka engaphezu kwe-100 kumava adibeneyo kwicandelo," watsho u-Anh Nguyen, uMseki kunye neGosa eliLawulayo eliyiNtloko yeProCare Health. "I-ProCare ihamba phambili ekunyamekelweni okulawulwayo, igxininise ekulawuleni ukusetyenziswa, ukucwangciswa kwesifo esilungelelaniswa nomngcipheko kunye nokuncedisa ababoneleli ekunikezeni unyango olusemgangathweni kwizigulane zabo."